Islam ကိုနားလည်ခြင်း (Part 2) Who is Allah? – Kyaw Kyaw Oo's Thoughts, Love and Hope
Islam ကိုနားလည်ခြင်း (Part 2) Who is Allah?
Posted on March 2, 2009 April 28, 2009 by kyawkyawoo	Posted in islamTagged allah, ကုရအန် အကြောင်း, ကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ, ကျမ်းမြတ် ကုရအန်, ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဆူတည်းကိုယုံကြည် သောဝါဒြ, ဖန်ဆင်းရှင်ရှိသည်, အာရေဗျကျွန်းဆွယ, ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာမဲ့များ, burmese muslim, burmese muslim minority, Burmese Muslims, English Translation by Abdulah Yusuf Ali, Invitation to all Muslim Minorities, islam, Islam ကိုနားလည်ခြင်း, Myanmar Muslim, myanmar muslim minority, panthay muslims, religion. military junta of burma, Who is Allah
ပြီးခဲ့သည့် post တွင် ဖန်ဆင်းရှင် ရှိမရှိ စဉ်းစားရန် တင်ပြခဲ့တယ်။
Islam သည် ဖန်ဆင်းရှင်တစ်ဆူတည်းကိုယုံကြည် သောဝါဒ ဖြစ်သည်။
ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကဖွင့်ဆိုပုံကိုဒီ Post မှာဆွေးနွေးပါမယ်။ပြီးတော့
ဖန်ဆင်းရှင်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ပြီး နောက်တဆင့်ဖြစ်သည့် Allah ကလူသား
များကို လမ်းညွန်ပြသည့် နောက်ဆုံးကျမ်းမြတ် ကုရအန် အကြောင်းကို
ဖန်ဆင်း ရှင်ရှိသည်ဟုယုံကြည် ပြီးနောက် ကျွန်တော်တော့အားလုံး ဖန်ဆင်းရှင်က
လူသားကိုဆက်သွယ်မှူပြုသည့် တမန်တော်များနှင့် ကောင်းကင်ကျ
အာရပ်လူမျိုးများသည် AD ခြောက်ရာစု ကျမ်းမြတ်ကုရအန်မကျခင်အလွန်
ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာမဲ့များဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမဒ် (PBUH)ပထမဗျာဒိတ်တော်ရပြီးနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်း
အာရေဗျကျွန်းဆွယ်တခုလုံး မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲ သွားခဲ့ တာကျမ်းမြတ်ကုရအန် ရဲ့အဆုံးအမကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အရက်ကို မြောင်းတွေပြည့်ွရှံအောင်သွန်ပြီး အာရပ်တွေဖန်ဆင်းရှင် ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာခဲ့တာ၊အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်ရေးအပြည့် အဝရခဲ့တာ၊ ကျွန်ပိုင်ရှင်စနစ် ချုပ်ငြိမ်းခဲ့တာ
အခုလဲ ဒီကမ္ဘာပေါ်ကသန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော် လူသားများ
(ကုရအန်ကျမ်းတော်မြတ်သည် အာရပ်ဘာသာစကားမူရင်း ဖြစ်၍ အာရပ်ဘာသာစကားသည်လွန်ခဲ့သောနှစ်တစ်ထောင့်လေးရာမှပြောင်းအလဲမရှိ
ဖန်ဆင်းရှင်ကို ကုရအန်က Allah ဟု ခေါ်ဆိုသည်။
Allah =/= God (အလ္လာ ကို God ဟု တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်၍မရပါ)
God (noun), Goddess(noun), Gods (Pleural) Goddesses (Pleural),Godly (Adj),God Father(n), God Mother(n),
Allah ကို God ဟုဘာသာပြန်၍မရပါ။အာရပ်ဘာသာ Grammarအရ Allah သည် gender မရှိပါ။ Allah သည်အာရပ်ဘာသာသဒ္ဒါအရ မည်သည့်စကားလုံးနှင့်မှဖလှယ်၍မရသည့်
Godဘုရား တွင် goddess ဟူ၍ gender ကျား၊မ..ရှိပါသည်။
ထို့အပြင် Allah ကို singular, pleural အများ ကိန်း ပြု၍မရပါ။ God, Gods ဘုရား ဘုရားများဟုဘာသာပြန်၍မရပါ။
Allah ကို English ဘာသာသုံးသလို God Father မွေးစားအဖေ God Mother မွေးစားအမေ
စကားလုံးဖလှယ်၍မသုံးနိုင်ပါ။တစုံတဦး၏ကြင်နာမှူကို Godly Action, Allah ကိုစကားလုံးဖလှယ်၍မသုံးနိုင်ပါ။
Allah သည်Allah သာဖြစ်သည် Allah နှင့်တူသည်အရာ ကျွန်တော်တို့dimension တွင်မရှိပါ။
ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေသော Allah (SWT) သည် မည်သူလဲလို့မေးသူ
တို့အတွက်ကျမ်းမြတ်ကုရအန်ကအခုလိုရှင်းရှင်းလေး ဖြေပြထားပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ရာသည် Allah ဟုဆိုလာပါလျှင် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရအန်က စူရာ112 တွင်
Allah ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွင့်ဆိုထားသည်။
Say:1. He is Allah, the One and Only!
2.Allah, the Eternal,Absolute;
3. He begetteth not nor is He begotten.
Allah သည်မည်သူတစ်ယောက်ကိုမှမွေးဖွားခဲ့ခြင်းမရှိ၊ မည်သူတစ်ယောက်၏မွေးဖွားခြင်းခံခဲ့ရခြင်းလဲမရှိခြင်း
4. And there is non like unto Him.
ဤစကြာဝဠာတွင် Allah နှင့်တူသည့်အရာတစ်ခုမှမရှိခြင်း
ဤအချက်လေးချက်နှင့်ပြည့်စုံလျှင် ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေသော Allah ဖြစ်သည်။
အနည်းဆုံးThe Holy Quran,English Translation by Abdulah Yusuf Ali, ဖတ်ရှူသင့်သည့်Quranဘာသာပြန်စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။
တမန်တော်မိုဟာမက် အမည်နောက်မှ (PBUH) ပါရခြင်းအကြောင်းပါ။
တမန်တော်မိုဟာမက်(Peace Be Upon Him ) ဟုလေးစားချစ်ခင်စွာဖြင့်မေတ္တာပို့ခြင်းကို
Islam ဘာသာဝင်များသည် တမန်တော်မိုဟာမက်(PBUH)မှလွဲ၍
အ ခြားသူများကိုမေတ္တာ ပို့ရန်မသိတတ်သူများအဖြစ်စွပ်စွဲချက်နှင့်စပ်လျှင်း၍
Islam ဘာသာဝင်များမပြုမနေရ တနေ့ငါးကြိမ် ဝတ်ပြုရာတွင်သန်းပေါင်းတစ်ထောင်ကျော်ရှိကမ္ဘာ Islam ဘာသာဝင်ထုကြီးကနေ့စဉ်
လက်ယာ လက်ဝဲသို့ ဦးခေါင်းကိုစောင်းလှဲ့ပြီးရှိသမျှဝေနေယအပေါင်းတို့ကို
တမန်တော်မိုးဇက်(မူဆာ)(PBUH)တမန်တော်ရေရှူ(အီဆာ) (PeacBeUponHim) ဟုလေးစားချစ်မြတ်နိုးစွာ
Allah ၏ ငြိမ်းချမ်းသောမဟာကရုဏာ အားလုံးပေါ်သို့ကျရောက်စေရန်ဆုမွန်ပြုလျှက်
3 thoughts on “Islam ကိုနားလည်ခြင်း (Part 2) Who is Allah?”
I have read the part 1 and 2. It is very good. Please continue. It is nice to read in Burmese. Thank you.
Pingback: Islam ကို နားလည်ခြင်း (Part 3) Is the Quran Allah’s word? « Kyawkyawoo’s Weblog
((အာရပ်လူမျိုးများသည် AD ခြောက်ရာစု ကျမ်းမြတ်ကုရအန်မကျခင်အလွန်
ရိုင်းစိုင်းသော ဘာသာမဲ့များဖြစ်တယ်။ တမန်တော်မြတ် မိုဟာမဒ် (PBUH)ပထမဗျာဒိတ်တော်ရပြီးနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်း ))
Please don’t use the word, bar thar mae’. There are so many Bar thar mae’ who are clever, intelligent, great innovators and great thinkers who can rival any religious founder in the world.
Rather, you can use ‘Pagans’ or ‘Barbarians’, for pre-Islamic Arabs.
Why?? Because there isarumor spreading around like Bar thar mae’ are communists or immoral junks, which are quite wrong portraying of bar thar mae’.
Islam ကိုနားလည်ခြင်း(Part 1)
Indonesia Tightening The Rules on Polygamy